Juxa “Puntland waxay galeysaa doorasho, Dowladda waxaan uga digeynaa inay….” – WidhWidh Online
Juxa “Puntland waxay galeysaa doorasho, Dowladda waxaan uga digeynaa inay….”
Cabdi Faarax Saciid Juxa, Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federalka Somaliya ayaa sheegay in dowladda aysan qibrad weyn u laheyn siyaasadda arrimaha dibadda, islamarkaana siyaasadda arrimaha dibadda ay hada tahay mid ku socota qarda jeex.
Wuxuu tusaale u soo qaatay khilaafka Sacuudiga iyo Canada oo uu tilmaamay in dowladda ay ku deg degtay go’aanka ay qaadatay, wuxuu sheegay inuu la yaaban yahay in siyaasadda Somaliya ay Afhayeen u noqoto dalalka ay xasaradaha soo kala dhexgalaan.
“Waxaa ii muuqda aniga runtii aniga siyaasada Arrimaha dibada oo ah mid qarda jeex ah, waxa ugu dambeysay arrinta u dhaxeysa Sacuudiga iyo Canada waxayna iila muuqataa in uu yahay go’aankaas mid lagu qasbay”. Ayuu yiri Wasiir hore Juxa.
Dhanka kale Wasiir Juxa ayaa sheegay in dowladda federalka Somaliya iyo cid kasta ay kaga digayaan inay faraha la soo galaan doorashada Madaxweyne-nimo oo dhawaan ka dhaceysa degaanada Puntland.
“Dowladda Federalka, Puntaland doorasho ayay galeysaa, waa arrin iyada gaar u ah, waa arrin taabaneysa masiirkooda, rabitaankooda iyo mustaqbalkooda, waxaan dowladda iyo cid kasta oo kaleba ka codsaneynaa ugana digeynaa in aysan arrintan faraha la soo gelin.” Ayuu yiri Wasiir hore, Juxa.
Hadalkan ayaa wuxuu ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, halkaasi oo uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan hoggaanka Puntland.
Baarlamaanka Kenya oo loo gudbiyay codsi ah in Ciidamadda Kenya laga saaro Soomaaliya
Wararkii U Dambeeyay Ee Doorashada Koonfur Galbeed